Na-asọpụrụ Play 4T na Play 4T Pro bụ ndị isi na gam akporo 10 na enweghị ọrụ Google | Gam akporosis
Honor Play 4T na Play 4T Pro bụ ndị isi na Android 10 na enweghị ọrụ Google
Onyeka Onwenu | | Huawei, Mobiles
Sub-brand nke Huawei taa kwupụtara ọkwa ọhụrụ ọhụrụ abụọ na-abịa ikpuchi etiti etiti na ọnụ ahịa asọmpi. Honor egosipụtalarịrịrịrị nzacha Kpọọ 4T na onye enyi ọhụrụ a maara dị ka Kpọọ 4T Pro. Abụọ na-abịa ọdịiche dị iche iche site na elele anya mbụ.
Companylọ ọrụ Asia chọrọ bulie òkè nke ahịa ekwentị yana ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ, ọ bụghị naanị ọnụ ụlọ ọrụ dị ugbu a, Honor na-adịbeghị anya mara ọkwa ụdị ahụ Sọpụrụ 30S y Sọpụrụ Sọpụrụnụ 9A, A na-agbakwunye ha ihe abụọ nwere ike ibikọ ọnụ.
1 Sọpụrụ Play 4T, atụmatụ ya niile
1.1 Nnweta na ọnụahịa
2 Sọpụrụ Play 4T Pro, atụmatụ ya niile
2.1 Nnweta na ọnụahịa
Sọpụrụ Play 4T, atụmatụ ya niile
El Na-asọpụrụ Play 4T na-ejikọta 6,39-anụ ọhịa IPS LCD panel na mkpebi HD + (pikselụ 1.520 x 720), usoro 19: 9 na onye na-agụ mkpịsị aka ga-anọ n’azụ. The Play 4T na-egosi na elu aka ekpe a perforation ịgbakwunye 8 megapixel selfie igwefoto mmetụta.
Asia họrọ Kirin 710A mgbawa, ihe nhazi asatọ, anọ n’ime ha na 2,2 GHz na anọ ndị ọzọ na ọsọ nke 1,7 GHz, ebe ndị eserese ahụ bụ Mali-G51 MP4. Ihe nchekwa RAM gụnyere 6 GB na otu nsụgharị, 128 GB nke nchekwa na oghere mmeba nke ihe ruru 512 GB.
Otu n’ime nnukwu akụ ya bụ ihe mmetụta sensọ azụ abụọ, nke bụ isi bụ megapix 48 na nke abụọ bụ ụdị 2 Bopih megapixel. Batrị ahọpụtara bụ 4.000 mAh na ụgwọ 10W, na ngalaba njikọ ọ na-abịa na 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC na Micro USB ụdị ọdụ ụgbọ mmiri. Honor Play 4T na-etinye gam akporo 10 na-enweghị ọrụ Google na Magic UI 3.0 omenala oyi akwa.
El Sọpụrụ Play 4T rutere China na Vmall, Ọ ga-abụ ókèala ọ na-ebu ụzọ abịa ma ọ ga-anọgide na-amata nnweta na mba ndị ọzọ. Ọnụahịa ahụ bụ yuan 1.199, ihe dị ka euro 155 iji gbanwee.
Sọpụrụ Play 4T Pro, atụmatụ ya niile
Modeldị ihe ngosi na-ahọrọ maka ihuenyo OLED 6,3-inch Ọ ga - enye mkpebi FullHD + (pikselụ 2.400 x 1.080), nha 20: 9 na onye na - agụ akara mkpịsị aka ga - adị n’okpuru ihuenyo ahụ. Igwefoto selfie dị n'ihu na njedebe a na-abịa n'etiti na ihe mmetụta bụ megapix 16, okpukpu abụọ nke Play 4T.
Honor Play 4T Pro na-agbakwunye CPU dị ike karị, ụbụrụ nke ekwentị a bụ Kirin 810, mgbawa 7 nm nwere isi asatọ, abụọ n'ime ha dị na 2,27 GHz na isii ndị fọdụrụ na 1,88 GHz, ebe GPU na-eso ya bụ ARM Mali G52 MP6. Na Pro anyị nwere ebe nchekwa na nchekwa abụọ, 6/128 GB na 8/128 GB, enwere ike ịgbatị ya na nke 512 GB site na oghere MicroSD.
Pro version na-agbakwụnye ngụkọta nke ese foto atọ, nke kachasị bụ megapixels 48, ihe mmetụta 8-megapixel wide-angle na nke abụọ 2 megapixel Bokeh. Batrị ahụ bụ 4.000 mAh na 22,5W ngwa ngwa, njikọ 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC na Micro USB-C njikọ. Ọ na-abịa na gam akporo 10 na ime Anwansi UI 3.0 na enweghị ọrụ Google.
Ekwentị si n'aka Vmall gaa China na agba atọ na Ọ fọdụrụ ịhụ mgbasawanye nke Honor Play 4T Pro. 6/128 GB ga-efu 1.499 yuan (euro 194 na mgbanwe ahụ) na 8/128 GB (euro euro na mgbanwe ahụ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Honor Play 4T na Play 4T Pro bụ ndị isi na Android 10 na enweghị ọrụ Google
Samsung na-egosi Galaxy A71 5G, Galaxy A51 5G na Galaxy A21